IB dau(@) night cream အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
IB dau(@) night cream
IB cream လေးဟာ ဘာလို့Feedback တွေရတာလည်း???
ဘာလို့ အချိန်တိုအတွင်း ရောင်းအားတစ်ခုရသွားတာလည်း????
အဓိက ကတော့ Quality ကိုလူကြိုက်များလို့ပါ။
နောက်တစ်ခု သူပေးလိုက်ရတဲ့ဈေးနဲ့ ရရှိလိုက်တဲ့ အကျိုးရလာဒ်တွေအရမ်းကောင်းလို့ပါ။
တစ်ဗူးထဲ ဝယ်ပြီး မနက် /ည အသုံးပြုနိုင်သလို
မနက်ပိုင်းတစ်ခုထဲတင် ဘာတွေ အသုံးဝင်လည်း ကြည်မယ်နော် 👀👀👀👀
အောက်က ဇယားလို ဘာကြောင့်ib Cream ကို ရွးချယ်တာလည်းသူမှာ အဖြေပါပါတယ်။
လူတိုင်းဟာ Basic Process နေတိုင်းလုပ်ကျတယ်။အခြေခံ Skincare သုံးကျပါတယ်။
အပြင်ထွက်ရင် တော့ Basic Process ကော် Make-up Process ကော်သုံးရပါတာ်။
IB ဝယ်ထားတဲ့ Customer တစ်ယောက် ဆို ဘယ်လို အဆင်ပြေလည်း ?????
မနက် မျက်နှာသစ်မယ် ပုံမှန်လိမ်းနေကျ Toner ဒါမှမဟုတ် Serum လိမ်းမယ် ပြီးရင် Eye cream တစ်ခု လိမ်းကိုလိမ်းရမယ် နောက် Skincare တစ်ခုလိမ်းမယ်။
အပြင်ထွက်မယ် ဆိုရင် အဲ့ Skincare ပေါ် ကြာရှည်ခံအောင် BB cream လိမ်းရပါတယ်။2ways powder ရိုက်မယ်
Eye liner Eye Shadow ပါးနီး Blush လုပ်မယ် ပြီးရင် Lipsticks ဆိုမယ်။
IB Cream ဝယ်ထားရင်တော့ဖြင့်
မျက်နှာသစ်မယ် ပုံမှန် အရည်တစ်ခုလိမ်းမယ် ပြီးရင် IB လိမ်းမယ် (Eye/Skincare/BB)Basic ပြီးဘီ အဆင့်နည်းတယ် ငွေကုန်နည်းမယ် အလုပ်ရှုပ်သက်သာမယ်။
နောက်နေ့ဖက်မလိမ်းတတ်သူတွေ အဆင်မပြေသူတွေအတွက် Comment မှ Video ရှိတယ်နော်။
Price 22500(Eye cream/DaySkincare /BB cream/Night Mask)
အမည်: IB dau(@) night cream